Cây trầu bà hợp tuổi nào? Ý nghĩa phong thủy, tác dụng, cách trồng và chăm sóc | Hatgiongtihon.net - trung tâm cung cấp hạt giống tí hơn
Đang Đọc: Cây trầu bà hợp tuổi nào? Ý nghĩa phong thủy, tác dụng, cách trồng và chăm sóc | Hatgiongtihon.net in Hatgiongtihon.net
Umthi weBetel nut waziwa ngokuba i-betel nut yegolide intle Ulutsha olungunaphakade ithandwa ngabadlali abaninzi bezityalo zasemanzini ngenxa yokukwazi ukuhlambulula umoya kunye nokuzisa inhlanhla ye-feng shui. Ibetel nut sisityalo sokuhombisa ekulula ukusikhulisa, sikhula ngokukhawuleza, akuyomfuneko ukuba sichithe ixesha elininzi ekusinyamekeleni yaye sineentlobo ezininzi. Ungakhankanya iintlobo eziqhelekileyo zemithi ye-betel nut njenge ibetel nut enamagqabi asarha, i-betel nut ebomvu i-emperor, umlawuli oluhlazakutshanje i-betel nut mutant.…Kweli nqaku, masifunde kunye ne-Khbvp ukutyala nokukhathalela i-betel nut kunye nokuba yeyiphi imithi elungele ubudala, iziphumo kunye neentsingiselo ze-feng shui zalo mthi wokuhombisa wangaphakathi.
1 Yintoni umthi webetel nut?
2 Uyintoni umphumo webetel nut?
3 Ukutyalwa njani ibetel nut
4 Indlela yokunyamekela umthi webetel nut
5 Ngaba ufanele ulime ibetel nut endlwini okanye ungayilimeli? Ngaba esi sityalo sinetyhefu?
6 Intsingiselo yomthi webetel nut
6.1 Liyintoni ikamva lomthi webetel nut?
6.2 Ingaba ilungele iminyaka emingaphi i-betel nut?
7 Iintlobo zemithi yebetel nut
7.1 Umthi obomvu we-emperor betel nut
7.2 Umlawuli oluhlaza we-betel nut
7.3 Umlawuli wegolide weBetel nut
7.4 I-betel nut yegolide
7.5 I-betel nut emhlophe
7.6 Ibetel nut enamagqabi akrazukileyo / Betel nut enomngxuma
7.7 Ibetel nut enamagqabi asarha
7.8 I-betel nut propeller / iBetel nut karate
7.9 Betel nut Thai
7.10 Isandla sikaBuddha se-betel nut
7.11 Ibetel nut enamaphiko ephoenix
7.12 Ibetel nut yaseMzantsi Melika
7.13 I-betel nut marble / ubisi lwe-betel nut
Yintoni umthi webetel nut?
Igama lesiNgesi lebetel nut yiPothos, igama layo lezenzululwazi ngu Epipremnum aureum, ongowosapho lukaRay (Araceae), luhlobo lwesityalo esineentyatyambo. Amanye amagama anje ngoTrau Ba Vang, Van Nien Thanh leo, Hoang Kim cassava, Hoang Tam Diep okanye Thach Cam Tu zonke zizalathiso. Umthi wakhe webhetele.
Le bonsai ibizwa ngokuba yibetel nut kuba ifana nomthi webetel nut. Ngokweempawu zebhotani, esi sisityalo esinamagqabi, imidiliya, amagqabi kunye neziqu ziluhlaza kwaye iintyatyambo zikhula ngokwamaqela amafutshane, ngoko kwezinye iindawo ikwabizwa ngokuba yibetel nut. Isici esibalaseleyo sibonakala silula, isiseko samagqabi sibunjwe yintliziyo kwaye ngokuthe ngcembe siye sanyuka ukuya phezulu.
Amagqabi eBetel adla ngokuba namachokoza atyheli kwincakuba yamagqabi. Iziqu zithambile, zinde kwaye zinokujinga, ngoko ke unokukhuliswa ngokwendlela yomdiliya. Ukongezelela, esi sisityalo sasemanzini se-hydrophilic, sithatha amanzi amaninzi ngaphandle kokwesaba ukuchithwa kwamanzi kunye nokubola kweengcambu, ngoko ke unokukhuliswa embizeni yamanzi.
Ibetel nut iye yaba sisityalo sokuhombisa kwaye ibonakala kwiindawo ezininzi, idla ngokukhuliswa ngaphakathi ezindlwini apho kukho ukukhanya okuphakathi kokuhombisa, okutsha kunendawo yokuhlala, ifanitshala yegadi. Abadlali bemithi badla ngokubeka ibetel nut kwiimbiza ezijingayo ezibekwe etafileni okanye zijinga kwi trellis ukuze umthi uwe phantsi kakuhle kakhulu.
Ukongeza kwixabiso lobuhle bokuhombisa, umthi we-betel nut unezibonelelo ezilungileyo kwimpilo yabantu kunye nentsingiselo ye-feng shui yokuzisa ubutyebi. Ixabiso lomthi alibizi kakhulu, ukusuka kwi-100K-500K VND kuxhomekeke kuhlobo.
Funda ngomthi oguquguqukayo webetel nut
Imutant betel nut kuthiwa yibetel nut yaseMzantsi Merika enegama lesiNgesi I-Monstera Mint ibangela umkhuhlane kumaxesha akutshanje kuba ixatyiswe ngexabiso elikwayinto ‘eyothusayo’, ukuya kuthi ga kwiibhiliyoni zeedong.
Abathengisi besi sityalo esiguqukayo bathi esi sityalo sinqabile yaye siphantse sabhanga endle. Eyona nto ibangela ukuba zibize kakhulu kukuba azinakusasazwa ngakumbi. Noko ke, iingcali zezolimo zithi ibetel nut yaseMzantsi Merika iye yatshintsha ngokwenene okanye kusafuneka ivavanywe ukuze ifumane imizila yemfuza. Imithi yebetel nut eguqukayo inokusasazwa.
Uyintoni umphumo webetel nut?
Ukongeza ekubeni sisityalo esisebenzayo sokuhombisa ukuhlobisa kwangaphakathi, i-betel nut ineempembelelo ezimbini ezinenzuzo kakhulu kwimpilo, ekuhlanjululwa komoya kunye nonyango lwesifo sezintso kumayeza aseMpuma (Ngokutsho kweChina Medicine). Isichazi-magama sezityalo zonyango zaseVietnam). Kunye nomthi wemali, iintlobo zebetel nut zasemanzini zizityalo zokuhombisa zangaphakathi ezizisa umoya omtsha.
Kwigumbi le-10 m2, kufuneka kube ne-1 ukuya kwi-2 imithi ye-betel nut ehlambulula ngokufanelekileyo umoya, isenze sikhululeke kwaye siphumle. Ezinye iigesi ezinetyhefu kunye neetyhefu ezinokufunxwa zizityalo ziigesi zebenzene, imitha yemitha evela kwizixhobo zombane ezifana neefowuni, oomabonakude, njl.
Ukutyalwa njani ibetel nut
Njengoko sele kukhankanyiwe, ibetel nut sisityalo ekulula ukusikhulisa nekulula ukusikhulisa yaye akufuni ukuba ube nobuchule okanye uchithe ixesha elininzi usinyamekela. Unokuyikhulisa lula imithi yebetel nut eluhlaza kwiimbiza ezijingayo ukuze wenze ifanitshala yekhaya okanye isitiya sakho.
Ukusasaza i-betel nut ngokusikwa kunye nokusikwa emhlabeni. Lo msebenzi ulula kwaye uyakhawuleza, kuya kufuneka ukhethe amasebe atyebileyo kunye awomeleleyo okusika.
Usika icandelo lebetel nut malunga ne-5-10cm enendawo etshisa ingcambu, uyeke isiphunzi some kancinci uze usike kumhlaba ofumileyo. Nceda uyigcine kwindawo enomthunzi, kude nelanga elithe ngqo. Elona xesha lilungileyo lokutyala amagatyana amatsha kwimidiliya yebetel nut kukwintwasahlobo nasehlotyeni. Emva kokusikwa, kufuneka unkcenkceshele kanye ngeentsuku ezingama-2-3, ukunkcenkceshela ngendlela yenkungu elula, kodwa ingabi kakhulu kwi-cuttings.
Kuthekani ngokukhula emanzini okanye ukukhula kwii-aquariums? Kuya kufuneka usike iqhekeza lesityalo malunga ne-10-20cm equlethe iingcambu kunye namagqabi. Uhlamba iingcambu kwaye uzibeke kwi-aquarium. Sekunjalo inqaku kukugcina umthi kwindawo epholileyo, ukuphepha ukukhanya kwelanga ukuze umthi uvelise amasebe amatsha.
Indlela yokunyamekela umthi webetel nut
Xa ukhathalela esi sityalo sasemanzini, kufuneka uqaphele la manqaku alandelayo ukuze usigcine sihle kwaye sisempilweni:
Umthi weBetel nut ufanelekile kakhulu ukuhonjiswa ngefanitshala yangaphakathi njengegumbi lokuhlala, ibalcony okanye igadi ngebetel nut yasemanzini. ayifuni ukukhanya okukhulu, yibhonsai ethanda umthunzi. Ngokukodwa, ukuba utyalwe ngaphandle, ukuxhoma iimbiza kwiibhalkhoni okanye kwiifestile, izityalo ziyakwazi ukuphila ngokupheleleyo. Nangona kunjalo, ngemini ekhanyayo yelanga, umthi “uya kutshiswa”, ungabe uhle njengowokuqala.
Ngokuphathelele umhlaba, kufuneka usebenzise umhlaba ovulekileyo, omanzi, ongawagcini amanzi. Ukwandisa i-porosity yomhlaba, kufuneka udibanise ngakumbi amalahle atyunyuziweyo, amalahle okanye irayisi ebolileyo i-husk humus.
Ngexesha lokunyamekela kufuneka ubeke ingqalelo kwiqondo lokushisa eliphantsi. Abalimi abasoloko benganikeli ngqalelo ingako kule ngxaki banokufumana amagqabi atyheli. Ubushushu obufanelekileyo bokukhula kwesityalo busuka ku 15 degrees celcius ukuya kuma 26 degrees celcius.
Ngaba amanzi nanini na ngumbuzo abazibuza wona abadlali bebetel nut. Ukuba ukhulela ngaphakathi kwindlu, kufuneka unkcenkceshele amaxesha amabini ukuya kwi-3 ngeveki ngokwaneleyo.
Indlela yokutshintsha amanzi ukuba ibetel nut ikhuliswe emanzini nayo ilula kakhulu. Xa amanzi omile, uqhubeka ukongeza amanzi amatsha, qwa lasela ukuba amanzi anamafu okanye cha, ukuba kunjalo, tshintsha amanzi kwisityalo.
Ngaba ufanele ulime ibetel nut endlwini okanye ungayilimeli? Ngaba esi sityalo sinetyhefu?
Abantu ngaphambi kokuba badlale badla ngokuzibuza ukuba yintoni umphumo webetel nut? Ukufunda eli candelo kuya kukunceda uqonde ukuba ungayilimela na okanye ungayilimeli ibetel nut endlini. Ngokweempembelelo zenzululwazi, oku kuyinto eqinisekisiweyo, ngoko unokuthembela ngokupheleleyo.
Ibetel nut ikhuliswa ukunceda ukususa iigesi eziyingozi kunye netyhefu esemoyeni, yiyo loo nto abantu besithi “sisicoci esincinci”. Ngoko ke, ukugcina izityalo kwigumbi lokulala akuyingozi, kodwa kunenzuzo.
Ngokukodwa, ayinakukwazi ukunceda kuphela ukucoca umoya ulwimi lwengweI-betel nut inokufunxa imitha ye-elektroniki eyingozi efana nemitha ephuma kwiifowuni, iikhompyuter, amaza e-wifi, ii-oveni zemicrowave, umsi wecuba, ..ungasibeka isityalo kwigumbi lokuhlala, iofisi. Ukongeza, ukuba ukhulisa izityalo zamanzi kwi-aquarium , ikwanceda ukufunxa isodiyam emanzini. Oku kwenza amanzi acoceke kwaye intlanzi isempilweni.
Ngaba umthi webetel nut unetyhefu?
Ukongezelela kwezi ngenelo zikhankanywe ngasentla, nayiphi na intsapho ifanele inikele ingqalelo xa abantwana abancinane besiza okanye bedlala ngomthi webetel nut. Kuba, ibetel nut inetyhefu emagqabini nakwiziqu. I-calcium oxalate kwisityalo iya kubangela umlomo ovuthayo, isicaphucaphu, urhudo, …
Intsingiselo yomthi webetel nut
Ibetel nut ineentsingiselo ezininzi, ukongezelela kubuhle bayo nempilo yayo, abantu bayikhathalele kakhulu imithi ye-feng shui ngokweminyaka Ukuze uhambelane nekamva lawo, umthi webetel nut uluhlaza, kulula ukuwukhulisa, yaye awufuni kunyanyekelwa kakhulu. Ngoko ke, lo mthi webhonsai uthetha ukuzalwa kunye nophuhliso lokuchuma, imali kunye nenhlanhla yomnini.
Kwi-feng shui, i-betel nut “ngumthi wemali”, oya kunceda yonke into ihambe kakuhle, ngokulula nangokugudileyo ngaphandle kokudibana nayo nayiphi na imiqobo. Kukholelwa ukuba umfanekiso webetel nut ugxotha amashwa uze uzise amathamsanqa ebomini.
Le nkolelo ikholelwa ngabantu abaninzi, ngoko ibonakala kumakhaya amaninzi, iidesika, kunye neeofisi zenkampani.
Liyintoni ikamva lomthi webetel nut?
Sisityalo sokuhombisa esifanelekileyo kuyo yonke i-destiny kwaye asiyiyo i-taboo nayiphi na i-destiny. Kuzo zonke iipari, eyona feng shui idityanisiweyo yebetel nut yiMoc par. Aba ngabantu abanesisa, abanobubele abasoloko benceda abanye.
Noko ke, ubuninzi bayo nantoni na akulunganga, nto leyo ekhokelela ekubeni basoloko bethemba abantu yaye baphenjelelwe ziimvakalelo ukuchaphazela eminye imiba.
Ngoko ke, ibhodwe le-betel nut kwidesksi okanye kwigumbi lokulala liya kunceda ukukhawulela loo ngxaki, ukubanceda ukuba babe nengqiqo, baqaphele kwaye bangenzi iimpazamo.
Ungabona ngakumbi: Ngowuphi umthi owona mthi ufanelekileyo? Imithi ye-bonsai engama-20 ye-feng shui elungileyo.
Ingaba ilungele iminyaka emingaphi i-betel nut?
Iingcali zeFeng shui zikholelwa ukuba umthi uya kunceda abantu ngokufanelekileyo ngonyaka weHorse, unceda ukuphumelela kwimali kunye nomsebenzi. Abantu abazalwe ngonyaka weHashe kufuneka babeke umthi we-betel nut endlwini ukutsala ukuchuma, ukunciphisa umkhwa wokumosha, kwaye bazi “ukugcina” imali ngendlela engcono.
Iintlobo zemithi yebetel nut
Ukuba ufuna ukwazi ukuba zingaphi iindidi zebetel nut ezikhoyo, nceda ujonge le nkcazelo ingezantsi. Le mifanekiso iya kukunceda uqonde yaye ukwazi ukwahlula iindidi ezahlukeneyo zebetel nut.
Umthi obomvu we-emperor betel nut
Umlawuli oluhlaza we-betel nut
Ikwabizwa ngokuba ngumthi oluhlaza wenkosi enamagqabi aluhlaza amnyama, aluhlaza unyaka wonke, kulula ukukhula, kulula ukuwakhathalela. Uneminyaka emingaphi umthi webetel nut we-emperor eluhlaza?? Umthi oluhlaza weemperor betel nut ulungele ubudala babantu abasebenzisa ipar nepar fire kuba lo mthi umela ipar wood. Umnini wale minyaka kunye ne-destiny yokutyala i-emperor eluhlaza uya kutsala inhlanhla, idumela elihle.
Umlawuli wegolide weBetel nut
Umthi wegolden emperor betel nut ulungele ubudala nekamva lomhlaba nabantu abachwela.
I-betel nut yegolide
I-betel nut emhlophe
Ibetel nut enamagqabi akrazukileyo / Betel nut enomngxuma
Ibetel nut enamagqabi asarha
I-betel nut propeller / iBetel nut karate
Betel nut Thai
Isandla sikaBuddha se-betel nut
Ibetel nut enamaphiko ephoenix
Ibetel nut yaseMzantsi Melika
I-betel nut marble / ubisi lwe-betel nut
Apha ngasentla kukho inkcazelo ephathelele umthi webetel nut, imiphumo, intsingiselo yawo, nemiyalelo yeendlela ezichanekileyo zokutyala. Ibetel nut sisityalo esimele sibe kwikhaya ngalinye okanye kwiofisi nganye ukuze sincede ukuzisa umoya, ukutsala impumelelo, nokwandisa amathamsanqa kumniniyo.
Bona Okuninzi: Uluhlu lwezityalo ezingama-20 ezingakhuliswanga ngaphakathi ukuthintela ukuzisa izifo ebantwini